Sendikaly Randrana : mendrika ve ny asa eto Madagasikara? – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/Sendikaly Randrana : mendrika ve ny asa eto Madagasikara?
Henintsoa 7 octobre 2021
Mifanindry an-dalana amin’ny fankalazana maneran-tany ny asa mendrika izay ankalazaina isaky ny 7 oktobra dia nikarakara hetsika ny sendikaly Randrana androany. Lohahevitra novohizina nandritra izany ny hoe ” tandindomin-doza ny fiahiana ara-tsosialy amin’ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara”. Nomarihina tamin’ny fizarana marim-pankasitrahana sy fifampizarana ny tokony ho fantarin’ny mpikambana ny hetsika. Tafiditra ao anatin’ny tapany faharoa amin’ny fanatanterahana ny fandaharan’asa ho an’ny asa mendrika i Madagasikara.
Mampametram-panotaniana hoe mendrika ary ve ny asa eto Madagasikara. Ny maha-mendrika ny asa dia asa mamokatra, ny fanajana ny lalàna ary ny fiahiana ara-tsosialy 33% isan-jaton’ny filàn’ny mpiasa amin’ny tokony ahamendrika ny asany ihany no mbola tanteraka eny amin’ny sehatra tsy miankina hoy ny filohan’ny sendikaly randrana, Rakotomanga Barson. Rehefa sosialy no resahana eto Madagasikara dia CNaPS izay hoy ity filoha ity. Mariky ny maha tandindomin-doza an’ity sehatra ity ny fampiasana ny vola nalaina tany amin’ny Airmad sy ny fakana vola mitentina 150 tapitrisa ariary isan-taona ao amin’ny kitapom-bolan’ny CNaPS andoavana ny karaman’ny mpanazatran’ny barea teo aloha.
Eo koa ny filazana fa anisa’ny andrim-panjakana hakana ny hentina manangana ny “fonds souverains” ny cnaps. Mangataka ny fanajanonana ny fandoavana ny karaman’ny mpanazatran’i Barea ny sendikaly. Tsy manaiky koa ny hakana vola hananganana ny “fonds souverains” izy ireo. Tsy tokony hatao tantely hafa-drakotra hoy izy ny fampiasana ny vola ao, izay volan’ny mpiasa madiodio. Nasiany teny koa ny momba ny fiahiana ara-tsosialy mitentina 175.000 ariary izay homena ny mpiasa very asa nandritry ny kirizy aram-pahasalamana nateraky ny valanaretin covid-19. Tsy tokony noferana 1600 ihany ny isan’ny mpisitraka io fanampiana io. Tsy voatery ferana ny fotoana fa tokony tohizana hatrany amin’ny farany volana novambra. Maro ny ezaka atao ahamendrika ny asa eto Madagasikara hoy hatrany i Rakotomanga Barson.
Manohana ny hetsiky ny PAT ny SECES
Tanterahina any Fianarantsoa ny zaikabe faha-9 iarahan'ireo mpisehatra manam-pahaizana manokana momban'ny fampatoriana sy famelomana aina
Mpiasa ECD miisa 242 no tafiditra ELD: Ministeran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny asa tanana
Rocade d’Iarivo: le délai des travaux respecté
PRM: ireo fepetra tapaka mandritra ny 15 andro manaraka
Appréciations de l’OSC ROHY sur la LFI 2022 : encouragements, transparences et crédibilités.
Fin de mandat de la CENI : lancement de la procédure de remplacement la semaine prochaine
Trafic de 73, 5 kg d’or : les trois suspects libérés contre 100 000 rands